Izindaba - 2021 Power-Packer Exhibits E-CMEF EShanghai
IPower-Packer isanda kukhonjiswa eChina International Medical Equipment Fair; I-International Component Manufacturing & Design Show (i-CMEF) eShanghai. Umbukiso omkhulu kunayo yonke yezinsizakusebenza zezokwelapha, imikhiqizo ehlobene nezinsizakalo esifundeni sase-Asia-Pacific, i-CMEF inikeze ithuba lokugqamisa iphothifoliyo yezokwelapha yakwa-Power-Packer kanye nokubuka kuqala umkhiqizo wayo wakamuva, i-electrical drive unit (EDU), njengolandelayo isizukulwane ekusebenzeni.
I-EDU wuhlelo lwe-electro-hydraulic oluhlanganisa ipompo ye-hydraulic, isilinda kanye nenjini kagesi. Ngalolu hlelo oluphakeme kakhulu lwamandla, kungenzeka ukwahluka ukulayisha kanye ne-velocity kunoma iyiphi indlela, ngokuzimela komunye nomunye. Uhlelo ludinga kuphela ukuxhumana kwamandla kagesi ukuze lusebenze. Yenzelwe izinhlelo zokusebenza lapho kudingeka khona ukulungiswa okuqondile emithwalweni eguquguqukayo kanye / noma ngejubane. Izinketho zethu eziningi zokumisa zivumela i-EDU ukuthi ilingane kahle ezinhlelweni eziningi. Isici sokuthamba sokuqalisa esithambile siqinisekisa induduzo nokuphepha. Lolu hlelo olunamandla aminyene lwenza kube nokwenzeka ukulawula ngokuphelele ukusheshisa kanye nejubane ngisho nangaphansi kwemithwalo esindayo.
"Inhloso yethu yeCMEF bekuwukwakha ulwazi lomkhiqizo nokubamba imikhondo," kusho uPatrick Liu, oyiMedical Manager iPower-Packer China. “Ukuba khona kwethu jikelele kanye nethimba lombukiso eliqinile kusisizile ukukhulisa ukubonakala futhi kwakhombisa ukuthi sisebenza kakhulu kunanini ngaphambili ezimakethe. Izivakashi zombukiso zinikezwe umbono omuhle kakhulu, futhi amakhasimende ethu manje anokwazisa nokuqonda okukhulu ngemikhiqizo yethu esezingeni eliphezulu. ”
Kuwo wonke umbukiso wezinsuku ezine wezohwebo, leli qembu lasabalalisa izinhlu ezingama-83 futhi lenza oxhumana nabo abangama-28, ikakhulukazi abavela ezifundazweni zaseChina i-Hebei, Shandong, Jiangsu naseGuangdong. Khombisa izivakashi ikakhulukazi abakhiqizi baseChina ngenxa yemikhawulo yokuhamba ye-COVID-19. Abayisithupha kwabathintwayo bekungamathuba anentshisekelo yokwakha imibhede emisha yasesibhedlela namakheshi.
I-CMEF ibanjwa kabili ngonyaka, entwasahlobo nasekwindla. Ababekhona embukisweni wasentwasahlobo bebeyi-120,000, eyayiphezulu kune-2020 kepha isephansi ngenxa ye-COVID-19.
Sithanda ukubonga wonke amakhasimende ethu kanye namakhasimende angahle abe khona ngokuvakasha kwakho edokodweni lethu i-CMEF kulo nyaka nangentshisekelo yenkampani nemikhiqizo yethu.
Isikhathi seposi: 17-06-21